Joe Biden oo Erdogan u arka qodaxda ugu adag ee hor-taagan danaha Mareykanka | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Joe Biden oo Erdogan u arka qodaxda ugu adag ee hor-taagan danaha...
Joe Biden oo Erdogan u arka qodaxda ugu adag ee hor-taagan danaha Mareykanka
Joe Biden ayaa sheegay inuu xakamayn doono awooda Turkiga, Iran, Sucuudiga iyo Imaraadka haddii uu Ku Guuleysto Doorashada.
Turkiga, iyo gaar ahaan Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, ayaa noqon doona qodaxda ugu adag Biden haddii la doorto.
Madaxweyne-ku-xigeenkii hore wuxuu u arkaa Erdogan inuu yahay kaligii taliye xukunka haysta, oo ah daalim wax u dhima danaha Mareykanka. La wareegitaankii sanadkii la soo dhaafay ee nidaamka difaaca cirka ee Ruushka ee S-400, oo kasoo horjeedda NATO iyo siyaasadda Mareykanka, wuxuu sare u qaaday xiisadda iyo xanaaqa u dhexeeya Washington iyo Ankara heerar cusub. Biden wuxuu kamid ahaa taageerayaasha cunaqabateynta ka dhanka ah Turkiga, laakiin taageerada adag ee Trump ee Erdogan waxay fashiliyeen dadaallada noocaas ah.
Biden wuxuu ka dalbaday Trump inuu ku cadaadiyo Turkiga “inay ka waantoobaan ficil kasta oo daandaansi ah” colaada ka aloosan Gariiga ee ku saabsan xuquuqda qodista ceelasha bariga Mediterranean. Wuxuu sidoo kale aad uga soo horjeedaa ku lug lahaanshaha Turkiga ee dagaalka Nagorno-Karabakh. Wuxuu yiri waa in maamulka Trump uu dalbadaa in Turkiga “uu ka baxo khilaafkan.” Wuxuu sidoo kale ugu baaqay Erdogan inuu “ka noqdo go’aankiisii ​​[July] ee ahaa inuu Hagia Sophia u beddelay masaajid” isla markaana uu soo celiyo maqaamkiisii ​​madxaf. Quursiga Biden ee Erdogan wuxuu caddeeyay wareysi uu siiyay bishii Diseembar New York Times, markii uu soo jeediyay in Mareykanku “la yimaado qaab ka duwan kii hore” hoggaamiyaha Turkiga.
“Waan taageeri karnaa cunsurrada hoggaanka Turkiga ee weli jira oo aan wax badan ka helno iyaga oo aan ku dhiirrigelinno inay awoodaan inay la wareegaan oo ay ka adkaadaan Erdogan, mana ahan afgambi, laakiin hannaanka doorashada,” ayuu yiri, oo dhaliyay caro baaxad leh Turkiga Taageerayaasha Erdogan waxay sii wadaan inay ku faafiyaan baraha bulshada iyagoo cadeyn u ah waxyeelada iyo halista uu Turkigu ka filan karo guushii Biden.
Turkiga wuxuu ku xiranyahay halgan uu kula jiro Midowga Yurub oo ku saabsan hamigiisa tamarta ee badda Mediterranean, wuxuu ku lug leeyahay dagaallada Liibiya iyo kuwa Kurdiyiinta Suuriya, guud ahaanna wuxuu dareemayaa hanjabaado cunaqabateynta Midowga Yurub. Xaaladdaas awgeed, taageerada Trump waa lagama maarmaan. Cabsida ka jirta Ankara ayaa ah in Biden uu dheellitiri karo isku dheelitirka ciidamada si uu u waxyeeleeyo isla markaana u helo dabadhilif umadaha reer Yurub inay noqdaan kuwa dagaal badan, sida Turkiga ay u wajahayso dhibaato dhaqaale oo aad u daran, halka ay isku dayeyso inay isu dhisto sidii awood goboleed iyo mid caalami ah.